Qubsuma Koo 14: "Qorri cimee, guyyaan yoo gabaabattu biyyaa koon yaada" - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Meba Tadesse
Mebaa Taaddasan Jedhama. Biyya Ingilizitti jiraataa magaala Oxfoordiiti. Jalqaba kaniin dhufe garan magaala carraa barnootaa itti argadhe, Landanitti dha. Barnoota koo sadarkaa lammaffaa fi Yunivarsiitii achumatti ergan xumuree booda wagga 10 niin jiraadhe.
Magaala Landan keessatti carraan hojii argachuu dhiphaa waan tureef gara magaalalee birootti imaluufin dirqame. Fedha naannolee biros ilaaluun qaba waan tureef gara Oxfoord dhufee kunoo waggaa Afur jiraadhe.
Yunivarsiitii Oxfoord jalatti Kooleejjii Koorpis Kiristii jedhamu keessatti kutaa bulchiinsa koonfiransii keessan hojjedha. Hojiin koos maamilootaa tajaajila Yunivarsiitii kooleejjichaa fayyadamuu fedhan qunnamuu fi barattoota waliin walitti dhufeenya jiru cimsuu dha.
Akkan dhufeen adeemsa mana hojii kanaa baruun na rakkisuus yeroo keessa garuu hunda isaa baruu danda'eera.
Magaala Oxfoord kana keessatti sirni kenninsa barnootaa gaarii waan ta'eef namoota baratan hedduutu jira. Gaheen magaalittiin guddina biyyittiin gama barnootaan irra jirtuuf bahes olaanaadha.
Ergan as dhufee wanti baayyee na dinqe garaagarummaa jireenyaa baldha jiraattota jidduu jiru dha.
Koolejjii ani keessatti hojjedhuttillee garaagarummaan haala jireenyaa warren sadarkaa gidduu galeessarra jiraaniifii sooreyyii jidduu jiru kan keenyarraa adda. Fakkeenyaaf takka takka barsiisonni faldhaan meetii irraa hojjetameen wayita nyaatan nan arga. Garaagarummaan kun yoomiyyuu na dhiba.
Magaala kana keessattii osoon aangoo qabaadhee waa jijjiiruu danda'ee wantin godhu carraa dorgommii hojii nama hundaaf banaa gochuu dha. Sababni isaas yeroo hedduu carraa hojii kan argatan eebbifamtoota Yunivarsiitii Oksiifoordii. Kanaafuu dorgommi hojii walaba ta'e fiduun carraa hojii hundaafin bana ture.
Okisfoord magaala xiqqoo dha, yeroo hundumaa magaala Finifinneetti naannoo Piyaassa bakkin itti yaadadhu jira.
Kutaan magaalittii gidduugala daldalaa ta'e bakka namni itti heddumatuu dha. Daandiin naannoo sanii dhiphaadha, konkolaattonnis waldabarsuuf ni rakkatu, yeroon kana ilaalu biyya koon yaadadha.
Yeroo hundumaa wanti biyyaa ani baayyee yaaduu qilleensa isaati. Qilleensi biyya keenyaa salphaa fii kan namatti tolu dha. Cabbiis ta'u ho'a hammaataa miti.
Asitti garuu waqtiin cabbii dheerachaa yeroon bonaa gabaabachaa yeroo deemu maal ta'a osson qilleensa biyya koo argadheen jedha.
Asiimmoo kan baayyee natti tolu karaa foddaa koollejotaa fi Yunivarsiitilee mimmiidhagoo erga hundaa'anii umurii waggaa 400 fi 500 qaban ilaaluu dha. yeroo yerootti Kana arguu danda'uun koo anaaf carroomuudha.
Wanti biraan asitti natti tolaa nyaadhu nyaata biyya Taaylaandi 'Thai Green Care' jedhamuu dha. Nyaata mi'awaa Foon, handaaqqoo fi gosa qurxummiilee garaagaraa wajjin hojjetamuu danda'u dha. Mana koottis yeroo heddun bilcheeffadha.
Tasa ka'ee carraa gara biyya wayiitti barrisuu osoon aragadhee Dirre Dhawaatti barrisee hawwii kooti.